မုန့်လာဝယ်တဲ့ မိန်းကလေးငယ်ကို လိင်ပိုင်းစော်ကားနေတဲ့ CCTV မှတ်တမ်း - CeleLove
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုမှကာမတဏှာမှု ကျူးလွန်ချင်သူတွေ လူစိတ်ကင်းမဲ့နေသူတွေ များပြားလာတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ သမီးရှင် ဖြစ်ရတဲ့ မိဘတွေဟာ ဝဋ်ကြွေးတစ်ခုလို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေပီလား….????
သမီးမိန်းကလေးမွေးထား ပြီးတဲ့ သမီးရှင်မိဘတိုင်း အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ အရွယ်က စပြီး သမီးအတွက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေတာတွေက ဒီခေါတ်ကြီးမှာ ဝဉ်ကြွေးတစ်ခုလို တကယ်ကိုခံစားနေကြရပါပီ….။
မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက် အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေတွေနဲ့ ခေါ်ပျက်ကြီးဆိုတာကို ရောက်ရှိနေသလိုပါပဲ….။
ယခု ဖော်ပြခဲ့တဲပ CCTV ရုပ်ကံ ဗီဒီ ယိုဖိုင်ဟာ မလေးရှား နိုင်ငံက မုန့် ဆိုင်တစ်ဆိုင် အတွင်းမှာ မုန့်လာဝယ်နေတဲ့ အရွယ်မရောက်သေးသူ ညီအမ နှစ်ယောက်လို့ ယူဆရတဲ့ သမီး ငယ်နှစ်ယောက်ကို အခြား ဈေးဝယ်သူ လို့ထင်ရတဲ့ ယောက်ကျားတစ်ယောက်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာ အတင်းအဓမ ပြုလုပ်နေတာကို မုန့် ဆိုင်၇ဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာ မြင်တွေခဲ့ ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် လ…။
ဒီ ဗီဒီယို ဖိုင်ကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖြန့်ဝေနေကြသူတွေကလည်း မိဘတိုင်းကို သတိပေးချင်သဖြင့် Share လုပ်ပေးနေကြတာကိုလည်း တွေ့ ရပါ တယ် …။
အခု ဒီပိုစ့် လေးကို တွေ့ မြင်သူတိုင်ကလည်း သမီးရှင် မိဘများအတွက် မိမိရဲ့ ရင်သွေး ငယ်များကို မည်သည့်နေရာကိုမှ လူကြီးမပါပဲ မလွှတ်မိကြစေဖို့ အထုးသတိပေးသွားကြ ပါလို့ AlinnMyay မှာ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းတောင်းဆို လိုက် ရပါတယ် …။
AlinnMyay ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကူးယူ ဖော်ပြသည် …။
Thant Zayar Naing (သတင်းလွှာ)
မုနျ့လာဝယျတဲ့ မိနျးကလေးငယျကို လိငျပိုငျးစျောကားနတေဲ့ CCTV မှတျတမျး
အရြယ္မေရာက်သေးတဲ့ မိန်းကေလးတြေကိုမွကာမတဏွာမှု က်ူးလြန္ခ်င်သူတြေ လူစိတ္ကင်းမဲ့နေသူတြေ မ်ာျးပားလာတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမွာ သမီးရွင်ျဖစ်ရတဲ့ မိဘေတြဟာ ဝဋ်ကြေးတစ္ခုလို့ျေပာရမလျိုဖစ်နေပီလား….????
သမီးမိန်းကေလးမြေးထား ပြီးတဲ့ သမီးရွင္မိဘတိုင်း အရြယ္မေရာက်သေးတဲ့ အရြယ္က စပြီး သမီးအတြက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြေနတာတြေက ဒီခေါတ်ကြီးမွာ ဝဉ်ကြေးတစ္ခုလို တကယ္ကိုခံစားနေကြရပါပီ….။
မိန်းကေလးငယ်တြေအတြက် အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ်ရာ အျေခအေနေတြနဲ့ ခေါ်ပ်က်ကြီးဆိုတာကို ရောက်ရွိနေသလိုပါပဲ….။
ယခု ဖော်ျပခဲ့တဲပ CCTV ရုပ္ကံ ဗီဒီ ယိုဖိုင်ဟာ မေလးရွား နိုင်ငံက မုန့် ဆိုင္တစ္ဆိုင် အတြင်းမွာ မုန့်လာဝယ်နေတဲ့ အရြယ္မေရာက်သေးသူ ညီအမ နွစ်ယောက္လို့ ယူဆရတဲ့ သမီး ငယ်နွစ်ယောက္ကို အျခား စေ်းဝယ်သူ လို့ထင်ရတဲ့ ယောက္က်ားတစ်ယောက္က လိင္ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖြယ္မရာ အတင်းအဓမျပုလုပ်နေတာကို မုန့် ဆိုင်၇ဲ့ CCTV မွတ္တမ်းမျွာမင်တြေခဲ့ ရတာပျဲဖစ္ပါတယ် လ…။
ဒီ ဗီဒီယို ဖိုင္ကို လူမွုကြန်ယက္မျွာဖန့်ဝေနေကြသူတြေကလည်း မိဘတိုင်းကို သတိပေးခ်င်သျဖင့် Share လုပ်ပေးနေကြတာကိုလည်း တြေ့ ရပါ တယ် …။
အခု ဒီပိုစ့် လေးကို တြျေ့မင်သူတိုင္ကလည်း သမီးရွင် မိဘမ်ားအတြက် မိမိရဲ့ ရင်သြေး ငယ္မ်ားကို မည်သည့်နေရာကိုမွ လူကြီးမပါပဲ မလွှတ္မိကြေစဖို့ အထုးသတိပေးသြားကြ ပါလို့ AlinnMyay မွာ လေးစားစြာ တိုက္တြန်းတောင်းဆို လိုက် ရပါတယ် …။
AlinnMyay ၏ ခြင့်ျပုခ်က်ျဖင့် ကူးယူ ဖော်ျပသည် …။